🥇 ▷ Dagaalkii Casriga ahaa 'wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tafatirto qalabkaaga inta ciyaarta lagu jiro ✅
Dagaalkii Casriga ahaa ‘wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tafatirto qalabkaaga inta ciyaarta lagu jiro
Infinity Ward, istuudiyaha gadaashiisa Baaqa: Waa Dagaallada Casriga ah, ayaa cadeeyay inay dhageysanayaan faallooyinka bulshada si ay u bixiyaan cinwaan la kulma himilooyin sare. Mid ka mid ah dib-u-dhaca ugu weyn ee riwaayadda, oo soo joogay illaa bilowgii, ayaa ah inaanay ciyaartoydu awoodin tafatir hubkaaga inta ciyaarta lagu jiro. Ugu dambeyntiina taasi waa laga tagi doonaa iyada oo la bixin doono qaybta xigta
Horumariyayaashu waxay iska dhigaan in ciyaaryahanka uu la qabsado qaabka ciyaarta ciyaarta
Soo-saareyaasha ayaa taas ku xaqiijiyay iyada oo leh Dagaal casri ah mar dambe ma noqon doonto lagama maarmaan in la sugo ciyaar ku dhamaanaysa si loogu habeeyo xulashada hubka, iyo waliba waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo dhalo. Shirkadda ayaa xustay in tan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad laqabsato qaabka ciyaarta iyo caqabadaha kaladuwan ee ka soo baxa wakhtigaas, badiyaa qaababka taageeraya tiro aad u fara badan oo ciyaartoy ah.
Xusuusnow in, markii ugu horreysay taariikhda magac-u-yeerista, lagu dari doono Dagaalkii dhulka, hab aad u tiro badan oo ujeeddadeedu tahay inuu la tartamo ka soo horjeedka tiirarka Goob Dagaal. Hada, tijaabooyinka waxaa ku jira laba koox oo ka kooban 32 ciyaartoy, si kastaba ha noqotee, Infinity Ward ayaa shaaca ka qaaday taas Habkani wuxuu taageeri karaa in ka badan 100 khariidad weyn. Waxaan heysan doonnaa gawaarida noocyadeeda kala duwan.
Sannado badan waxaan u maleyn jirnay in hadii qof wax qori karo hubkiisa inta ciyaarta uu maqnaan doono, laakiin leh waxyaabo badan oo kala duwan, waa wax lagu farxo in wax laga beddelo duulimaadka. laakiin waxay dareemaysaa farxad marka aad si dhakhso ah u beddesho qalab dheeri ah iyada oo ku xidhan xaalada, ”ayuu raaciyay Geoff Smith, madaxa naqshada.
Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay ballanqaaday in waxay noqon doontaa soo gudbinta iyadoo leh waxyaabo badan oo taariikhda ku jira, kaliya maahan bilaabinteeda, laakiin sidoo kale nuxurka bilaashka ah ee la sii deyn doono goor dambe. Dagaal casri ah Wuxuu ku faafin doonaa kaararka xilli ciyaareedka si looga hor tago bulshada inuu u kala qaybsamo sababto ah DLC-yada. Cinwaanka ayaa lagu soo dayn doonaa Oktoobar 25 on PlayStation 4, Xbox One iyo PC.